ओजिल टर्कीस क्लब फेनर्वाचे जाने !
एजेन्सी । लामो समयदेखि आर्सनलको स्क्वाडबाट बाहिर रहँदै आएका जर्मन स्टार खेलाडी मेसुट ओजिल अन्तत टर्कीस क्लब फेनर्वाचे जाने चर्चा चलेको छ । विस्तृतमा
'व्याक टु व्याक' फर्ममा म्यानचेस्टर सिटी, एस्टनभिल्लाविरुद्ध सहज जित
म्यानचेस्टर युनाइटेड पुनः लिगको शिर्षस्थानमा उक्लियो
रियल मड्रिडमा हाजार्ड फ्लप सावित
चेल्सीका प्रशिक्षक फ्रांक लाम्पार्डको जागिर धरापमा !
महिला लिग फुटबल आजदेखि, पहिलो खेलमा आर्मी र पुलिस भिड्दै
चेल्सीलाई पराजित गर्दै लेस्टर सिटी प्रिमियर लिगको शीर्ष स्थानमा उक्लियो
म्यानचेस्टर सिटीः अगुइरोको विकल्प को हुनसक्छ ?
सन् २००६ को जस्तो नियती फ्रान्सले पुनः नभोगोस्
काठमाडाैँ । सन् २००६ मा भएको विश्वकपको फाइनल खेलमा इटाली र फ्रान्स आमने सामने भए । फ्रान्सलाई अग्रता बनाएका जिनेदान जिदानले मार्को माटेराजीलाई टाउकोले हिर्काए ।
यी रेफ्रीलाई दिइयो विश्वकपको फाइनल खेलको जिम्मेवारी
फिफाले विश्वकप फाइनल खेलका लागि अर्जेन्टाइन रेफ्री नेष्टोर पिटानालाई छनोट गरेको छ ।
मदिराले मातिएका गणेश थापाले पूर्वसांसदलाई दिए ठिक पार्ने धम्की
काठमाडौं । विश्वकप फुटबलले सबैको ध्यानाकर्षण गराइरहेका बेला अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का तत्कालीन अध्यक्ष गणेश थापाले एउटा तारे होटलमा आयोजित सामाजिक समारोहमा पूर्वसांसद रामहरि खतिवडालाई ‘ठिक पार्ने’ धम्की दिएका छन्।
पोग्वाले भनेः क्रोएशियालाई हराएर इतिहास रच्नेछौं
एजेन्सी । फ्रान्सका प्रतिभाशाली मिडफिल्डर पाउल पोग्बाले विश्वकपको फाइनलमा क्रोएशियालाई हराएर नयाँ इतिहास लेख्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यसअघि सन् १९९८ मा विश्वकपको उापधि जितेको फ्रान्सको नयाँ पुस्ता निकै राम्रो रहेको छ ।
चेल्सीद्वारा प्रशिक्षक कोन्टे बर्खास्त, नयाँ प्रशक्षिकमा माउरित्सियो सार्री !
एजेन्सी । इंग्लिस क्लब क्लब चेल्सीले प्रि–सिजन सुरु हुनै लाग्दा प्रशिक्षक एन्टोनियो कोन्टेलाई बर्खास्त गरेको छ । कोन्टेलो आफ्नो पहिलो सिजनमा नै क्लबलाई उपाधि जिताएका थिए ।
'मेस्सीसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण रोनाल्डो युभेन्ट्स गए'
काठमाडौँ । पोर्चुगल तथा रियल मड्रिडका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले एकाएक रियल छाड्ने निर्णय गरे ।
विश्वकप विजेता राष्ट्रले उपाधिको साथमा कति नगद पुरस्कार पाउँछ ?
एजेन्सी । धेरैको चासोको विषय हो फिफा विश्वकप विजेता राष्ट्रले कति नगद पुरस्कार पाउँछ ? फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले आयोजना गर्ने कुम्भ मेलामा ३२ राष्ट्रले सहभागिता जनाउने गरेका छन् ।
एजेन्सी । हामी चाहन्छौ हाम्रो जीवनमा कसैले पनि धोका नदिओस् । खेल जीवनमा धेरै व्यक्तिहरुसँग संगत हुन्छ । कतिपय अभिन्न मित्र बन्छन् तर त्यही मित्रले कहिलेकाही ठुलै धोका दिने गर्छन् ।